TS Converter Mac - Beddelaan TS fudud oo dhakhso ah (Mavericks ka mid ah)
> Resource > Mac > Hel TS Converter u Mac si loogu badalo TS on Mac OS X (El Capitan ka mid ah)
Hel aqoonta aasaasiga ah ee qaar ka mid ah TS qaab video oo ay bartaan sida loo badalo TS on Mac leh xirfad TS Converter u Mac .
1. Maxaa file TS ah?
Gaadiidka durduri (.TS) waa hab maamuuska isgaarsiinta ah audio, video, iyo xogta. Waa nooc ka mid ah qaab weel digital in islamarkaana durdurrada hoose packetized iyo macluumaad kale. TS waxaa loo cayimay in MPEG-2 Qaybta 1aad, Systems (ISO / IEC heerka 13818-1). Waxaa sidoo kale loo yaqaan ITU-T Rec. H.222.0. Its gool design waa in ay oggolaadaan in multiplexing of video digital oo maqal ah iyo waafajinta wax soo saarka. Durduri Gaadiidka bixiyaa qaababka qaladka la saxo gaadiid badan warbaahinta aan lagu kalsoonaan karin, waxaana loo isticmaalaa in codsiyada warbaahinta sida DVB iyo ATSC.
2. Sidee u ciyaaro files TS on Mac lacag la'aan ah?
Sida loo ciyaaro TS on shabeel baraf, ama OS X Libaaxa? Files TS yihiin maalmahan aad u ballaaran oo ku faafay Internet-ka sida (caadi ahaan kala) cajalado laga sii daayaa HDTV. Sida qaab MPEG ah, waxaa jira noocyo kala duwan oo ciyaartoyda iyo habab si ay dib ugu ciyaaro files TS ama in ay iyaga loogu badalo in ay cabasho ka badan MPEG-2 faylasha loogu qoraalka sida DVD DVD / HD. Habka ugu fiican ee uu u ciyaaro files TS waa inaad kala soo baxdo iyo rakibi media player VLC . Xirmo VLC ayaa horay waxaa ka mid ah software inuu u ciyaaro MPEG-2 video content iyo taageerada furitaanka oo si toos ah u ciyaaro files TS. Waxaa intaa dheer, Mplayer OS X waa madal wanaagsan oo dhan isticmaala Mac inuu u ciyaaro badan oo kala duwan video files sida TS, TP.
3. TS Converter u Mac
Free download TS Converter u Mac :
Beddelaan TS in MOV, MP4, AVI, MKV, M4V iwm Mac
Si ay u dajiyaan faylasha video in iMovie u editor dheeraad ah, ama aad rabto inuu u ciyaaro kala duwan video files ciyaaryahanka la qaadi karo, waa loo baahan yahay si loogu badalo faylasha video inay qaabab habboon. Mac TS Converter samayn karaa shaqooyin fiican oo kuwa doonaya in loogu badalo TS video files si qaabab loo jecel yahay sida AVI, FLV, wmv, 3GP, 3GP2, 3GPP, 3GPP2, QuickTime (MOV), Mpg, MKV, iwm ka dib qaab beddelidda, waa ay fududahay in ay ku riday videos soo galeen iMovie aan wax dhibaato ah. Waxa kale oo aan si toos ah u gelin karo video ku galay ciyaartoyda sida iPod, iPhone, Apple TV, PSP, Zune, PDA / jeebka PC (oo ay ku jiraan BlackBerry), Creative kamidka ah, Archos, ciyaartoyda warbaahinta EPSON iyo telefoonka gacanta kasta.
Ka TS video on Mac Waraaqda audio
TS Converter u Mac waa barnaamij wanaagsan in la soo saaro audio ka TS videos la qasabno yar oo kaliya, waxaa dheer, codsiga weyn baa ina taageeri karaa si loogu badalo ka qaabab file maqal ah in MP3, M4A, regelingen, AC3, AAC, MKA, OGG, iwm on Mac.
Jar, dalagga, ku dar saamayn si TS video on Mac
Waayo, marar badan, aan ayaa dooneysa inay xaalkaa video ka hor inta aan la qaybsano saaxiibo ama qaraabo, tan aan rabno in aan ku siiyo natiijada ugu wanaagsan iyaga. TS Converter Mac waa barnaamij weyn noo ah in xaalkaa TS video files. Waxaan jar kartaa video si aad u hesho jecel video clips doorataa waqtiga ku bilaabatay iyo dhammaadka wakhtiga. Waa maxay dheeraad ah, waxaan awoodnaa in aan noola video ah in meesha laga saaro bar madow, oo waxaad ka samaysaa video kala duwan ee dadka kale adigoo sameynaayo dhalaalayaa iyo saturation.